Izindaba - Amathrendi amathathu embonini yokukhanyisa i-LED ngokuzayo
Amathrendi amathathu embonini yokukhanyisa i-LED ngokuzayo
Ethintwe ukuthuthukiswa kwamandla okuphelele kwemboni ye-LED yasekhaya kanye nomthelela omuhle wezinqubomgomo zikahulumeni, imboni ye-LED yaseChina iqhubekile nokufudumala eminyakeni yamuva, ekhombisa ukuthambekela okuhle ngobuningi nekhwalithi. Ezinye izinhlangano zezimboni zibikezela ukuthi imakethe yokukhanyisa i-LED yaseChina izofinyelela izinga lokukhula lonyaka elihlanganisiwe elingu-26.9% phakathi kowezi-2013 nowe-2018. Ngokwenyuka kokukhula okuphezulu, iChina izoba ngomunye wemakethe yezikhanyiso ze-LED ezingaba namandla kakhulu emhlabeni.
Kodwa-ke, yize isimo esihle sisengaphambili, ukuncintisana kwezimakethe nakho kuyaqina. Ngubani ongancintisana neChina futhi aziqhenye ngemakethe ye-LED? Umphumela awukaziwa namanje. Ngemuva kokuhwebelana okuqhubekayo nokujulile namabhizinisi ahamba phambili okupakisha kanye nabakhiqizi abaningi bamalambu nemishini yokukhanyisa, leli phepha lifingqa izindlela ezintathu zokuthuthuka zemakethe ye-LED yaseChina ngokuzayo.
Ithrendi 1: lwela ukwahlukaniswa komkhiqizo. Imikhiqizo enokuqukethwe kobuchwepheshe obuphansi izohlala njalo iyindawo "yenhlekelele" yokwenza homogenization. Ngokuthuthukiswa komncintiswano wamanani we-LED, abakhiqizi be-LED abaningi bayabona ukubaluleka kokwehlukaniswa komkhiqizo. Ukuze wakhe idizayini eyingqayizivele futhi udale izinzuzo zayo ezikhethekile, abakhiqizi abaningi bayabheka ilensi ye-silicone lens engabonakali engabunjwa ngomjovo.
I-Trend 2: ukudala ikhwalithi enhle kakhulu ye-optical ngobuchwepheshe obenziwe lula kuzoba yinto yangempela Namuhla, abakhiqizi bemishini ye-LED yezicelo zokukhanyisa okujwayelekile babhekene nenkinga enkulu: indlela yokwenza lula inqubo yokukhiqiza, ukunciphisa izindleko zokukhiqiza, ngenkathi ihlinzeka ngekhwalithi ye-optical engcono? Ngokuthuthuka kobuchwepheshe befilimu ye-fluorescent powder, isizukulwane esisha se-LED chip level package technology engakwazi ukufeza lezi zinhloso ezintathu ngasikhathi sinye izokhula ikhule ngokwengeziwe. Esikhathini esizayo, abakhiqizi bangasungula ngesibindi, badabule imodi ekhona ngoguquko nemodi yokukhiqiza, futhi bakhe isimo sokuwina nezindleko nekhwalithi phakathi kwabakhiqizi nabasebenzisi.
Ithrendi 3: Amadivayisi e-LED azothuthukisa ukusebenza kahle kokukhanyisa nokwethembeka. Ngokukhanya okuphezulu kwezicelo ze-LED, amachips wokukhanyisa amandla amakhulu angathuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kokukhanyisa nokuqina kwemikhiqizo. Kepha izindleko zokuthuthukisa ama-chips azishibhile, okwenza abakhiqizi abaningi bathuke. Ukuvela kokunamathisela okuphezulu kwe-index abicah resin emaphaketheni kunika izindleko ezengeziwe zokuncintisana futhi kube lula ukwenza ngcono ukukhanya kahle nokuqina.